45 Duuliye Itoobiyaan ah oo shaqada laga eryay iyo dad lagu xirxiray Addis Ababa.
Sunday March 26, 2017 - 16:45:34 in Wararka by Super Admin
Warar ay baahiyeen shabakado ku dhow dhow Mucaaradka dalka Itoobiya ayaa sheegaya in nidaamka dalkaas uu shaqada ka eryay 45 duuliye oo looga shakiyay iney gacan saar la leeyihiin qabaa'illada kacdoonka ka wada dakaasi.
Inkastoo ay adag tahay in la helo xog dheeraad ah oo la xidhiidha qaabka loo ruqseeyay duuliyeyaasha, hadane warar xagga warbaahinta ayaa sheegaya in qaarkood ay dibad joog yihiin halka kuwa kalena ay xabsiga ku jiraan.
Duuliyeyaasha la eryay ayaa isugu jira duuliyeyaasha diyaaradaha dagaalka iyo kuwa rakaabka.
Dhanka kale Ciidamada Itoobiya ee la dagaallamaya dadka ka kacdoonsan ayaa xoog ku galay Jaamacadda magaalada Addis Ababa iyagoona halkaasi kala baxay tiro arday ah, sida laga soo xigtay arday kale.
Howlgalka ay ku galeen Jaamacadda ayaa qeyb ka ahaa howlgallo qabqabasho ah oo laga fuliyay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa oo si weyn ay u degan yihiin dadka Oromada ee ku kacsan nidaamka Kooxda Tigreega ee loouga yaqaano TPLF-ta.
Diyaarad Aan Duuliye laheyn Oo Ku dul Haadday Qasriga Boqortooyada Sacuudiga.